Xukuumada TPLF oo Qoraal ka Soo Saartay Ururka ONLF – Rasaasa News
Oct 8, 2009 ethiopia, Jwxo-shiil, Ogaden, somalia
Walaashii Xaar ku diiqdii ninkii waaga naga yeelay, waayihii aan sugayniyo ninkii wacasho noo diiday, ee xabashi weedhii ay tidhi waaxda nagu gooyey, wacad qabe walaalkii dilow xabash walaalayso.
Xukuumada Ethiopia Tigray, ayaa waxay qoraal ay ugu talo gashay in ay ku dhiiri galiso maal gashadayaalka xiisaynaya dhulka Somalida Ogadeeniya, ayey ku sheegtay in ay soo af jartay dhaqdhaqaaqii uu ururka ONLF ka waday Ogadeeniya.
Dawlada Gumaysiga Ethiopia Tigray, ayaa waxy isku dayeysay muddo dheer in ay ka guulaysato Jabhada Wadaniga Xoraynta Ogadeeniya [Jwxo], oo iyadu u dagaalanta xoreynta dhulka Somalida Ogadeeniya. Xukuumada Tigray waxaa ay samaysay wax kasta oo ay kaga guulaysan karto ONLF, waxaana u suurto galiweyday in ay hal maalin wax yeesho Jabhada. Mudadii ay dagaalka waday ONLF, waxaa maalin walba sii kordhayey cududa ciidan ee Jabhada, waxaana kordhayey taageerada ay dadweynuhu u hayaan halganka iyo Jabhada, Jaaliyado taageersan Jabhada ayaa iska abaabulay meel walba oo aduunka ah.
Waxaa si xoogleh isu muujiyey awooda ciidan ee ururka ONLF, waxay Jabhadu cidhiidhi ku galisay xukuumada Tigray siyaasadda arimaha dibada, waxaa muuqatay wadaniyad weyn oo ayna loodin karin xukuumada Tigray. Waxaa soo wada daba galay Jabhada ONLF ururada mucaaradka ah ee Itobiya, waxayna muujisay ONLF, isbedel aan hore loogu arag Jabhadihii ka hana qaaday dhulka Somalida Ogadeeniya.
Awooda ONLF waxay gaadhay in ay yeelato dawlada dhamaystiran oo dalka iyo dibadaba ka hawl gasha, cid kasta oo mucaarad ku ahayd ayaa waxaa khasab ku noqotay in ay taageerto, waayo way isku tashatay ONLF waxayna ku tashatay taageerada dadweynaheeda dibad iyo gudaba “deeq shisheey diidnay danta Jwxo dhaafsan, doobka caana buuxaan ku dagaalamaynaa” wayna ahayd runtii.
Todobaad ka hore ayey xukuumada Ethiopia Tigray soo saartay qoraal ay ku sheegtay in ay baa,bisay Jabhadii ONLF, waxaa ka horeeyey laba qoraal oo la mid ah midanka ay soo saartay, kii kowaad waxaa ay soo saartay bishii la dilay Dr. Dolal iyada oo tidhi “waxaa la dilay hogaamiyihii ugu weynaa ururka ONLF sidaasi daraadeed ma jiri doono dagaal dambe oo ka dhaca Ogaden”. Tolow maxay ogayd xukuumada Itobiya! ummad 9 million ah oo uu ka dhintay hal hogaamiye sidii la arki jiray waxay ahayd hagaraarac lug kaliya umma dhutiyo, waxaase jira waxa ay Itobiya sheegtay.
ONLF, wax kasta oo ay soo qabatay, taariikh kasta oo ay reebtay qarnigan, waxaa Eebahay ugu daw galay dambiile Jwxo-shiil iyo kuwa ay ku bahoobeen burburinta halganka ummada Somalida Ogadeeniy. Waa aduun iyo caadadiis dadna aduunka way dhisaan oo horumar iyo wanaag ayey aduunka u horseedaan kuwana way dumiyaan wanaag kasta oo la sameeyo sida uu Jwxo-shiil sameeyey si la mid ah.
Waxaanan kolna ka xumaanaynin in ummada Somalida Ogadeeniya ayna odhan karin Jwxo-shiil in uu halganka duminayo na loogama digin “imisaa naloo digay imisaan ka daa nidhi imisay na dagayeen”. Dadweynaha Somalida Ogadeeniyow wax aan idinka cel celinaynay maantaad haysaan, wixii uu Jwxo-shiil doonayeyna waakan maanta taagan, waa meeshii uu ka lahaa halyeygii weynaa ee Somaliyeed Sayid Maxamed Cabdile Xasan “ma Mareexaan iyo Maxamed ha sugtaa Somali”, maanta waxaan leenahay “Arinta Ogaden waa Eebe weyne ha sugto iyo ayaan kale“.